शीर्षकमा बाइबल पदहरू: परिवार -> जीवन
 “मेरो आज्ञा यही हो— जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, त्‍यसरी नै तिमीहरू पनि एकले अर्कालाई प्रेम गर। साथीको निम्‍ति आफ्‍नो प्राण दिनु नै सबैभन्दा ठूलो प्रेम हो, योभन्दा ठूलो प्रेम त अरू केही छैन।
१ तिमोथी 5:8
बुबाहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ तर तिनीहरूलाई प्रभुको शिक्षा र तालिम दिएर हुर्काओ।
आफ्‍ना मित्र वा आफ्‍ना बुबाका मित्रलाई नभुल। दु:ख पाउँदा भाइबाट सहायता नमाग। टाढाको भाइभन्दा छेउको छिमेकी असल हो।
 येशूले खबर ल्‍याउने मानिसलाई भन्‍नुभयो, “मेरी आमा र मेरा भाइहरू को हुन्?” त्‍यसपछि चेलाहरूलाई औंल्‍याएर भन्‍नुभयो, “मेरी आमा र मेरा भाइहरू यिनीहरू नै हुन् किनभने स्‍वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको आज्ञापालन गर्नेहरू नै मेरा भाइ, बहिनी र आमा हुन्।”
 तिनले सोधे, “कुन आज्ञाहरू भन्‍नुभएको?” येशूले भन्‍नुभयो, “यिनै त हुन्— मान्‍छे नमार्नू, व्‍यभिचार नगर्नू, नचोर्नू, झूटो साक्षी नदिनू। आमा-बुबाको आदर गर्नू अनि आफ्‍ना छरछिमेकीलाई पनि आफैंलाई जस्‍तै प्रेम गर्नू।”
तिमीहरूले एक-अर्कालाई सहेर प्रेम देखाओ, कसैको विरोधमा केही कुरो छ भने माफ गर। प्रभुले तिमीहरूलाई माफ गर्नुभएझैँ तिमीहरूले पनि एक-अर्कालाई माफ गर।
यसकारण मौका मिल्‍नासाथ हामीले सबैको भलाइ गर्नुपर्छ, खासगरी ख्रीष्‍टमा विश्‍वास गर्नेहरूका घरानाको मानिसहरूलाई भलाइ गर्नुपर्छ।
१ कोरिन्थी १५:३३-३४
 धोखामा नबस। खराब संगतले असल मानिस पनि बिग्रन्‍छ। होशमा आओ। पाप गर्न छोड। तिमीहरूका लागि लाजको कुरा हो, तर म भन्‍छु तिमीहरूमध्‍ये कतिले परमेश्‍वरलाई चिनेका छैनौ।
कुनै-कुनै साथी धेरै दिनका हुँदैनन् तर कुनै-कुनै साथीहरू भने दाजुभाइहरूभन्दा विश्‍वासयोग्‍य हुन्‍छन्।
परमेश्‍वरका जनहरूले आपसमा मेलमिलापसँग जीवन बिताएको कति उदेक र आनन्‍दको कुरा हो!
मित्रले सधैँ प्रेम देखाउँदछ, दाजुभाइचाहिँ दु:खमा साथ दिने हुन्‍छन्।
बालकहरूलाई ठीक बाटो देखाऊ र तिनीहरूले त्‍यही बाटोमा हिँड्‍नेछन्।
“आफ्‍ना आमा-बुबालाई आदर गर र मैले दिएको देशमा तिमीहरू धेरै दिनसम्‍म बाँच्‍नेछौ।
तिमीहरू परमप्रभुको सेवा गर्न राजी छैनौ भने कसको सेवा गर्ने— मेसोपोटामियामा तिम्रा पुर्खाहरूले भजेका देव-देवताहरूको कि अहिले तिमीहरूले बास गर्दैगरेका एमोरी देशका देव-देवताहरूको? आजै निश्‍चय गर। म र मेरा परिवारले चाहिँ परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौं।”
धर्मी मानिस आफ्‍ना साथीको असल अगुवा हुँन्‍छ तर दुष्‍टको बाटोले नजानुपर्ने दिशातिर लैजान्‍छ।
 आज मैले तिमीहरूलाई दिएका यी आज्ञाहरू कहिल्‍यै नभुल। ती तिम्रा छोरा-छोरीहरूलाई सिकाओ। तिमीहरू घरमा छँदा वा बाहिर टाढा जाँदा, बस्‍दा वा काम गर्दा तिनको घरीघरी चर्चा गर।
 यसकारण परमप्रभुले यस्‍तो उत्तर दिनुहुन्‍छ: “के आमाले आफ्‍नो दूधेबालकलाई भुल्‍न सक्‍छे? र आफूले जन्‍माएका बालकलाई माया गर्न छोड्छे? तर आमाले आफ्‍नो बालकलाई भुले पनि म तिमीहरूलाई कहिल्‍यै भुल्‍नेछैनँ। हे यरूशलेम, म तँलाई कहिल्‍यै भुल्‍न सक्‍दिनँ! मैले तेरो नाम आफ्‍नो हत्‍केलामा लेखेको छु।
 [17-18] तर परमप्रभुलाई आदर गर्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँको प्रेम सदाकालको निम्‍ति रहनेछ। उहाँको करार साँचो प्रकारले मान्‍नेहरूमाथि र उहाँका आज्ञा विश्‍वासयोग्‍यसाथ पालन गर्नेहरूमाथि तिनीहरूका पुस्‍ता-पुस्‍तासम्‍म उहाँको भलाइ रहिरहनेछ। ***
बुढापाकाहरूले आफ्‍ना नातिनातीनाहरूमा गर्व गर्छन्, जसरी छोरा-छोरीहरूले आफ्‍ना बुबा-आमाको गर्व गर्छन्।
 छोरा-छोरीहरू परमप्रभुका दान हुन्, तिनीहरू साँचो आशिष् हुन्। युवावस्‍थामा जन्‍मेका छोराहरू वीरका हातमा भएका काँडजस्‍ता हुन्। आफूसँग यस्‍ता काँड धेरै भएको मानिस प्रसन्‍न रहन्‍छ। न्‍याय गरिने ठाउँमा आफ्‍ना शत्रुहरूसँग भेट हुँदा कहिल्‍यै उसको हार हुनेछैन।
मानिसहरूले आफूसित प्रेम-भाव गरेका चाहन्‍छौ भने तिनीहरूको दोष क्षमा गर्नू, दोष याद गरिराख्‍नाले मित्रता तोडिंदछ।
ए मेरो छोरा, आफ्‍नो बुबाले भनेअनुसार गर्‌ र आफ्‍नी आमाको अर्ती नबिर्सी।
मित्रले दिएको चोटले केही बिगार गर्दैन। तर शत्रुले अँगालो हाल्‍यो भने सावधान हुनू।
१ कोरिन्थी 15:33
धोखामा नबस। खराब संगतले असल मानिस पनि बिग्रन्‍छ।
धर्मी मानिसका बुबा रमाउनेछन्। बुद्धिमान् छोरामा गर्व गर्न सकिन्‍छ।
१ राजा ८:५७
परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वर हामीसित हाम्रा पुर्खाहरूसित झैँ रहनुभएको होस्। उहाँले कहिल्‍यै हामीलाई नछोड्नुभएको होस् वा नत्‍याग्‍नुभएको होस्।
तिमीहरू दुष्‍ट भएर पनि आफ्‍ना छोरा-छोरीलाई असल कुरा दिन जान्‍दछौ भने झन् स्‍वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसँग माग्‍नेहरूलाई कति बढी गरी पवित्र आत्‍मा दिनुहुन्‍छ।”
ए छोरो, तँ बुद्धिमान् भए म औधी प्रसन्‍न हुनेछु।
 त्‍यो मलाई खिसी गर्ने शत्रु हुँदो हो ता, म त्‍यसलाई सहन सक्‍थें। त्‍यो मलाई खिसी गर्ने शत्रु हुँदो हो ता, म त्‍योदेखि लुक्‍नेथिएँ। तर त्‍यो त तिमी मेरा मित्र हौ, मसँग काम गर्ने र मेरा हितका साथी! हामी आपसमा मनका कुरा खोलेर गर्थ्‍यौं र मन्‍दिरमा एकसाथ आराधना गर्थ्‍यौं।
फलामले फलामलाई उध्याउँछ, मानिसले मानिसको बुद्धिलाई तिर्खाछ।